မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးမည့် ယာဉ်များအတွက် အွန်လိုင်းမှ ယာဉ်စစ် ရက်ချိန်းယူသည့် စနစ?? - Yangon Media Group
မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးမည့် ယာဉ်များအတွက် အွန်လိုင်းမှ ယာဉ်စစ် ရက်ချိန်းယူသည့် စနစ??
မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်မှန် ကန်မှုရှိ/မရှိကို စစ်ဆေး မည့်ယာဉ်များအတွက် အွန်လိုင်းမှ ကြိုတင်ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူခြင်းစနစ် (Online Booking System) ကို သြဂုတ် ၂ဝ ရက် မှစတင်ကာ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည်ဖြစ် ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ယခုအခါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအပါအဝင် ခရိုင်ရုံးအသီးသီးတို့တွင် နေ့စဉ်မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင် မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ လာရောက်စစ်ဆေးသည့် ယာဉ်စီးရေများပြားလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှောက်နှေးကြန့် ကြာမှုမရှိစေရေးအတွက် ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူရန် www.rtad.gov.mm Websit တွင် ကြိုတင် စာရင်းသွင်းခြင်းကို သြဂုတ် ၂ဝ ရက်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကညနမှ ဦးစီးမှူး ဦးလျန်ကျင့်မန်က သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”ယာဉ်အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ မှာ Without ကားတွေကို အစားထိုးပြီး ဖောက်စွပ်လုပ်ထားတဲ့ကားတွေဖြစ်နေလား။ အဲဒီအရောင်းအဝယ်လုပ်မယ့်ကားက မှတ်ပုံတင်မှန်ကန်မှုရှိလား၊ မရှိဘူး လားဆိုတာကို လာစစ်ဆေးတဲ့ကားတွေက နေ့စဉ်အရမ်းကိုများနေတယ်။ အွန်လိုင်း ကနေ ရက်ချိန်းကြိုယူတဲ့စနစ်နဲ့ မဆောင်ရွက်တော့ ယာဉ်စစ်တဲ့ကားတွေက စာရင်း လာပေးတာတစ်ရက်။ တကယ်စစ်ဆေးမယ့် လာရတာတစ်ရက်နဲ့ အချိန်တွေလည်းကုန်တယ်။ နေ့စဉ်ယာဉ်စီးရေများ တော့ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ည ၈ နာရီ လောက်ထိ အလုပ်တွေမပြီးဆိုတော့ အွန်လိုင်းကနေ ရက်ချိန်းကြိုယူထားရင် ကိုယ်ရက်ချိန်းရထားတဲ့ တစ်ရက်ပဲလာရမယ်။ အချိန်ကုန်သက်သာတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင်ရယူခြင်း စနစ်စတင်ပြောင်းလဲချိန်မှစတင်၍ မော် တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှန်ကန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကို နေ့စဉ်ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးယာဉ် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးချိန် နေ့လည် ၂ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး လစဉ်လဆန်း ၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Online Booking ရယူခြင်းကို အနည်းဆုံး ၂ ရက်မှ အများဆုံး ရက် ၃ဝ အထိ ကြိုတင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်းလမ်းပို့ ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် နေ့စဉ်မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်မှန်ကန် ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ယာဉ်စစ်ဆေးသည့်ယာဉ် နေ့စဉ် ၁ဝဝ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အွန်လိုင်းမှ ကြိုတင်ယာဉ်စစ်ရက် ချိန်းရယူခြင်းစနစ် (Online Booking System) ကို စတင်ကျင့်သုံးမည့် သြဂုတ် ၂ဝ ရက်မှစတင်ကာ နေ့စဉ်ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲ(ရွာသာကြီး)တွင် ၂၅ စီး၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံးတွင် ၃၅ စီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံးတွင် အစီး ၅ဝ၊ တောင် ပိုင်းခရိုင်ရုံးတွင် ၂၅ စီးနှင့် မြောက်ပိုင်း ခရိုင်ရုံးတွင်အစီး ၃ဝ ကိုယာဉ်စစ်ဆေးပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောင်း ပရဝဏ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု မရှိစေရေး ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏